IZenzo 14 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
14 Ke kaloku eIkoniyo+ bangena kunye kwindlu yesikhungu+ yamaYuda baza bathetha ngokokude inkitha enkulu yamaYuda neyamaGrike+ ibe ngamakholwa. 2 Kodwa amaYuda angakholwanga axhokonxa+ abantu beentlanga, abafaka umoya ombi ngakubazalwana.+ 3 Bachitha ixesha elide bethetha ngenkalipho ngegunya likaYehova, owanikela ubungqina kwilizwi lobubele bakhe obungasifanelanga ngokunikela imiqondiso nemihlola ukuba yenzeke ngezandla zabo.+ 4 Noko ke, inkitha yesixeko yahlukana, yaye bambi babengakumaYuda kodwa abanye bengakubapostile. 5 Ke kaloku xa kwabakho ilinge logonyamelo kubo abantu beentlanga namaYuda nabalawuli bawo, ukuba babaphathe ngokusa baze babagibisele ngamatye,+ 6 bona, bakwaziswa ngako, basabela+ kwizixeko zaseLikawoniya, iListra neDerbhe nelizwe elijikelezileyo; 7 yaye apho baqhubeka bezivakalisa iindaba ezilungileyo.+ 8 Ke kaloku eListra kwakuhleli indoda ethile eyayilimele ezinyaweni, isisiqhwala ukususela esibelekweni sikanina,+ yaye yayingazange ihambe konke konke. 9 Lo mntu wayephulaphule uPawulos ethetha, owathi yena, ekhangele ngenyameko kuye yaye ebona ukuba wayenokholo+ olungamenza aphile, 10 wathi ngelizwi elikhulu: “Yima nkqo ngeenyawo zakho.” Yaye waxhuma waza waqalisa ukuhamba.+ 11 Zaza izihlwele, zibona oko uPawulos wayekwenzile, zaphakamisa amazwi azo, zisithi ngolwimi lwaseLikawoniya: “Oothixo+ baye baba njengabantu yaye bahlile beza kuthi!” 12 Yaye zabiza uBharnabhas ngokuba nguZeyus, kodwa uPawulos zisithi nguHermes, ekubeni wayengulowo ukhokelayo ekuthetheni. 13 Umbingeleli kaZeyus, otempile yakhe yayiphambi kwesixeko, wazisa iinkunzi zeenkomo nezidanga zeentyatyambo emasangweni yaye wayenqwenela ukunikela imibingelelo+ kunye nezihlwele. 14 Noko ke, xa abapostile uBharnabhas noPawulos bevayo ngoko, bakrazula izambatho zabo zangaphezulu baza baxhumela kuso isihlwele, bedanduluka 15 besithi: “Madoda, kutheni nisenza ezi zinto nje? Nathi singabantu+ abanobulwelwe+ obufanayo njengoko ninjalo nani, yaye sivakalisa iindaba ezilungileyo kuni, ukuba nani nijike kwezi zinto zililize+ niye kuThixo ophilayo,+ owenza izulu+ nomhlaba nolwandle nezinto zonke ezikuzo. 16 Kwizizukulwana ezidluleyo wazivumela zonke iintlanga ukuba zihambe ngeendlela zazo,+ 17 nangona, eneneni, engazange azishiye yena ngokwakhe ngaphandle kobungqina ngokuba wenza okulungileyo,+ eninika iimvula+ ezivela ezulwini namaxesha emveliso, ezizalisa iintliziyo zenu ngokutya nangokuchwayita.”+ 18 Naxa babezitshilo ezi zinto kwaba ngenkankulu ukuzithintela izihlwele ekubingeleleni kubo. 19 Kodwa amaYuda afika evela kwa-Antiyokwe naseIkoniyo aza azeyisela izihlwele,+ yaye zamxuluba uPawulos zaza zamrhuqela ngaphandle kwesixeko, zicinga ukuba ufile.+ 20 Noko ke, xa abafundi bamngqongayo, wavuka waza wangena esixekweni. Yaye ngemini elandelayo wemka noBharnabhas baya eDerbhe.+ 21 Emva kokuvakalisa iindaba ezilungileyo kweso sixeko nokwenza abafundi abaliqela,+ babuyela eListra naseIkoniyo nakwa-Antiyokwe, 22 besomeleza imiphefumlo yabafundi,+ bebakhuthaza ukuhlala elukholweni, besithi: “Simele singene ebukumkanini bukaThixo ngokuphumela kwiimbandezelo ezininzi.”+ 23 Ngaphezu koko, babamisela amadoda amakhulu+ kwibandla ngalinye baza, ngokuthandaza nokuzila ukutya,+ bawanikela kuYehova+ awayengamakholwa kuye. 24 Yaye bayityhutyha iPisidiya baza baya ePamfiliya,+ 25 kwaye, emva kokulithetha ilizwi ePerga, behla baya eAtaliya. 26 Ukusuka apho banduluka ngesikhephe besiya kwa-Antiyokwe,+ apho babenikelwe kububele obungasifanelanga bukaThixo ngomsebenzi ababewenze ngokupheleleyo.+ 27 Bakuba befikile yaye belihlanganisele ndawonye ibandla, baqala ukubalisa+ izinto ezininzi uThixo awayezenzile ngabo, nokuba wayezivulele iintlanga umnyango wokholo.+ 28 Ngoko bachitha ixesha elininzi bekunye nabafundi.